Izinambuzane | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | April 2020
I-beetle e-Rapeseed: izindlela zokulawula izinambuzane
I-beetle ehlaziyekile yacabangela ngokucophelela enye ye-insectoids eyingozi kakhulu ebangela ukulimala okukhulu kwezitshalo ezihlukahlukene zeklabishi. Kulesi sihloko uzothola ukwaziswa okuphelele mayelana nendlela yokubona le nkathazo kanye nendlela yokunikeza izinyathelo ezifanele zokumelana nalezi zinambuzane zihlasela imibhede yakho.
Indlela yokuletha amahlumela endlini
Emadolobheni anamuhla, cishe azikho amaphele. Leli qiniso elijabulisayo lichazwa ukutholakala kwama-microwaves ezindlini zokuhlala kanye ne-Wi-Fi, futhi ngokushiya umkhuba wokugubha iphepha lokunamathisela ku-starch lihlanjululwe emanzini, kanye ne-ecology, futhi ngasekupheleni kwezwe, nezizathu eziyinkulungwane ngaphezulu. Noma kunjalo, kukhona okungafaniyo okucasulayo. Futhi uma kungesinye isikhathi esingahle kakhulu isivakashi esingakalindelekile sibhekene netafula ekhishini noma kwenye indawo, kuzodingeka umbulale yena nezihlobo zakhe ngesikhathi esifushane kakhulu.
I-beetle yezokwelapha: ukusetshenziswa emithi kanye nokwelashwa komdlavuza
Izindlela zokwelashwa emithi yendabuko aziyeki ukumangaza. Le ndaba isivele ifika ku-zhukoglovaniya, futhi ifomu eliphilayo. Sikhuluma ngogqirha we-beetle, noma obumnyama, obani, ngokuya kwabaphilisa abantu, abakwazi ukulwa ngisho nezifo ezinje ezifana nomdlavuza ne-AIDS. Incazelo yezinto eziphilayo Ngokwebukeka - kuyinkimbinkimbi emnyama kuphela ngo-5 mm ubude obude.
Abashayeli efulethini: bavelaphi nokuthi bangabhekana kanjani nabo
Ubani owake wabona i-woodlouse, izoqinisekisa ukuthi le ndalo ayibangeli imizwa emihle. Angitholakali nje ngezinqwaba zamaqabunga abolile ekwindla noma emanzini angaphansi komhlaba, kodwa nasezindlini noma efulethini. Sizokukhuluma ngalesi silwane nokuthi singasikhipha kanjani ekhaya lakho. Humushela incazelo emuva ku-isiNgisi Humusha Incazelo Mokritsa, ngokungahambisani nenkolelo evamile, akuyona insect.